Vovon-kabary amin'ny tantara an-tsary: ​​inona avy izany ary inona no karazana balaonina eo? | Famoronana an-tserasera
Miboiboika kabary kabary
Androany ny tantara an-tsary dia iray amin'ireo "boky" izay hanombohan'ny tanora maro mamaky. Ny fampifangaroana ny sary sy ny soratra, ho azy ireo dia mora kokoa ny mamaky azy, ary mavesatra kokoa noho ny boky izay tsy misy azy ireo (na tsy amin'io ambaratonga io). Ankoatr'izay, fifanakalozan-kevitra fohy, ampidirina ao anaty lavaka mampihomehy, tsy dia manana lahatsoratra firy izy ireo ary vao mainka tian'izy ireo izany.
fa, Inona avy ireo bika komik? Misy tsy mitovy? Jereo izay rehetra tokony ho fantatrao momba io lafiny manan-danja amin'ny tantara an-tsary sy ny sary mihetsika io, ary ho hitanao ny fomba hanehoan'ny balaonina tsirairay ny hetsika na ny fihetseham-po isan-karazany.
1 Inona no atao hoe baoty mampihomehy?
2 Ireo singa ao anaty kabary komik
2.1 Inona no atin'ny gelika an-tsary?
2.2 Inona ny kontinanta ao anaty baomba mampihomehy?
3 Karazan-teny miboiboika
3.1 Ny baomba kabary kabary amin'ny tantara an-tsary
3.2 Ny eritreritra
3.3 Sandwich Comic: Ilay hiaka
3.4 Mitomany ao anaty baomba miresaka hatsikana
3.5 Bubble kabary
3.6 Bubble Comic: Ilay bitsika
3.7 Ny sandwich efajoro
3.8 Mipoapoaka ny kabary an-tsary: ​​miresaka miaraka
Inona no atao hoe baoty mampihomehy?
Ny bubble kabary kabary tantara an-tsary, antsoina koa hoe balaonina, Io no singa ampiasaina amin'ny tantara an-tsary, sary miaina na sarisary hanehoana ny hetsika fitenenana. Amin'izany, amin'ny alàlan'ity sary ity, ireo litera ao anaty taratasy dia avela hanana "feo", satria ny tanjon'izy ireo dia ny hanaovana fifanakalozan-kevitra amin'ireo olona hafa ao amin'ilay tantara.
Ny fiandohan'ireo sandwich ireo dia nitranga tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo, tany Angletera, izay nampiasan'ny mpanao sary sy mpanao sariitatra azy io indraindray. Saingy ny sariitatra voalohany nisy hatrany an-dry zareo dia ny Hogan's Alley, tamin'ny 1895, tantara an-tsary avy any Outcault, na dia ny marina aza dia misy ny fifanakalozan-kevitra momba an'io lohahevitra io satria mihevitra ny manam-pahaizana sasany fa tsy izany no izy.
Raha ny tany Eropa dia elaela vao tonga ilay tantara an-tsary. Nanao izany izy tamin'ny 1925 niaraka tamin'i Alain Saint-Ogan sy ny Zig et Puce. Ary raha te hahalala ianao, dia mbola niandry hatramin'ny faha-30 taonany izy ireo tany Japon. Ny voalohany? Sako Shishido miaraka amin'i Speed ​​Taro sy Ichiro Suzaki ary Takeo Nagamatsu miaraka amin'i Ogon Bat.
Ireo singa ao anaty kabary komik
Ny bubble comic dia misy singa roa tena ilaina eo amin'izy ireo: ny atiny sy ny kaontinanta.
Inona no atin'ny gelika an-tsary?
Ny atin'ny famoahana lahateny amin'ny tantara an-tsary manondro ny hafatra ao anatiny, izany hoe izay tianao hambara. Ao anatin'izany dia zava-dehibe ny fiheverana izay tsy holazaina, fa koa ny karazana na endri-tsoratra ampiasaina, ny onomatopoeia ary na ireo sary an-tsary aza.
Izany hoe, azonao atao ny mametraka bubble comic miaraka amin'ny jiro, miaraka am-po, miaraka amin'ny mariky ny dolara ... Na koa maneho feo (toy ny fipoahana (boom)).
Inona ny kontinanta ao anaty baomba mampihomehy?
Ny kaontinanta amin'ny tantara an-tsary dia ny endriny. Ary tsy mitovy foana izany. Raha ny marina dia misy karazana snack maromaro amin'izany. Ankehitriny, ao anatin'io endrika io dia manana faritra roa samy hafa koa ianao:
Contour, izay endrika ivelany amin'ny sandwich, izay afaka miaraka amin'ny nify tsofa, maka tahaka ny rahona, tototry ... Na izany aza, mba hanehoana fahatsapana sasantsasany dia azo ovaina toy ny jiro, fo ...
Ny rambony, fantatra koa amin'ny hoe rambo, izay mitodika hatrany amin'ny toetra amam-panahy izay mamoaka izany balaonina izany, izay miteny. Rehefa tsy manondro an'iza na iza dia lazaina fa "voice over". Matetika izy io dia miendrika vava vava, mankany amin'ilay olona miteny foana, fa indraindray, ary arakaraka ny lisitry ny velaran-tantara an-tsary dia afaka miova izany (mety ho dian-kapoka, boribory sns.).
Araka ny fantatrao, tsy ny rehetra ny bubble comic dia mitovy. Raha ny marina dia misy fahasamihafana lehibe amin'izy ireo ary, noho izany, tianay ny hampanakaiky azy ireo aminao eto ambany.
Ny baomba kabary kabary amin'ny tantara an-tsary
Ity no mahazatra indrindra, ary koa malaza indrindra eran'izao tontolo izao. No ampiasaina amin'ny asehoy izay lazain'ilay mpilalao amin'ny sariitatra, izany hoe ny resaka ataonao amin'ny hafa. Na dia azonao atao aza ny mieritreritra foana ny karazana fisaka sy boribory, ny tena izy dia miova ny endrika (ary matetika miankina amin'ny elanelana tavela isaky ny tontonana mifanaraka aminy).
Ahoana izao raha tsy miresaka olon-kafa ianao fa mieritreritra? Sa miteny irery? Raha tokony hampiasa ilay dinika, ampiasao ilay misaina. Io dia miavaka amin'ny hoe toy ny rahona. Eny, toy ny hoe niparitaka ilay izy ka noho izany dia tsy misy afa-tsy io toetra io ihany no resahina satria zavatra tsy fantatry ny hafa izany.
Ho fanampin'izany, mazàna aloaky ny boribory sasany, izay manondro ihany koa fa zavatra lazain'ny ao anatiny ilay toetra.
Sandwich Comic: Ilay hiaka
Efa namaky tantara an-tsary ve ianao rehefa mikiakiaka? Azonao antoka fa hitanao fa, rehefa mitranga izany, ny sandwich dia tsy toy ny rahona intsony, ary tsy vita amin'ny tsipika miolikolika, fa amin'ny tampon'ny tampony. Tamin'izany no fantatro manasongadina fa misy fiakaran'ny feo. Toy ny "fipoahana" io.
Mitomany ao anaty baomba miresaka hatsikana
Raha ny marina, ity karazan-tsakafo kely ity Azo ampiasaina amin'ny seho mitomany sy hatsembohana izany. Ary aseho ho toy ny tasy amin'ny rano izy io, izay manodidina azy dia misy rano mitete.
Talohan'ny nahitantsika ilay dinika fa, Inona no mitranga raha toa ka mijanona miteny foana ilay mpilalao? Manana resadresaka iray ianao, ary tsy misy afa-tsy olona iray ihany no miteny ary, noho izany, feon-teny roa no ampiarahina amin'ny lafiny iray, ka hita fa ilay olona mitovy toetra no miteny indray, miato eo anelanelan'ny fifanakalozan-kevitra sy ny fifampiresahana.
Bubble Comic: Ilay bitsika
Farany, manana ilay bikan'ny hatsikana mibitsika ianao. Satria eny, afaka mibitsibitsika zavatra koa izy ireo. Ary mba hisolo tena azy dia ampiasaina ireo tsipika nopotehina. Izany hoe, dian-kapoka mamorona sandwich feno.
Ny sandwich efajoro
Efa nihaona ve ianao a sandwich efajoro? Izany dia manondro, amin'ny ankamaroan'ny tranga, dia mpitantara ny mpandahateny. Raha ny marina dia ampiasaina izy io indraindray hametrahana ny mpamaky amin'ny toe-javatra misy zavatra nitranga.
Izy io koa dia matetika ampiasaina hametrahana taona, tanàna na firenena na koa hiresaka momba ny lafiny iray amin'ny tantara (apetraka amin'ny toe-javatra).
Mipoapoaka ny kabary an-tsary: ​​miresaka miaraka
Alao an-tsaina ny seho iray litera isan-karazany milaza zavatra mitovy. Eny, tsy tokony hanoratra sandwich ho an'ny tsirairay izy ireo fa ampifangaroin'izy ireo ho iray avy izay rambony (na rambony) izay mifanentana amin'ny toetra tsirairay mivoaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Miboiboika kabary kabary
Ireo tranonkala (na fampiharana) tsara indrindra hanovana ny sary JPG ho ICO